Sajhasabal.com | Homeप्रेमिका वा आफ्नै श्रीमतीको यी अंग नछुनुहोस् ! नत्र जीन्दगी...
प्रेमिका वा आफ्नै श्रीमतीको यी अंग नछुनुहोस् ! नत्र जीन्दगी...
एजेन्सी | धार्मिक शास्त्रले महिलाहरुलाई लक्ष्मीको रुपमा पुजा गर्छ । मानव सभ्यताको सुरुवात गर्ने श्रेयनै महिलाहरुलाई जान्छ । यदी महिला थिएनन् भने मानव सभ्यतानै रहने थिएन भने विश्वास रही आएको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ हिन्दु संस्कार तथा धर्ममा महिलाहरुलाई ठूलो महत्व दिइएको छ । त्यसकारण पनि महिलालाई भगावानको विभिन्न अवतारको रुपमा पूजा गर्ने चलन छ ।
वेद तथा धार्मिक ग्रन्थमा महिलाहरुका केही अंग पुरुषले छुन नहुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । महिलाको नाभी (नाईटो) लाई धर्मशास्त्रले पवित्र मानेको छ । शांस्त्रले महिलाको नाभीलाई पुरुषले कहिल्यै पनि छुन नहुने भनेको छ । महिलाको नाभीलाई यस कारण पवित्र मानिन्छ कि त्यसमा माता काली बसेकी हुन्छिन् । त्यसै कारण पुरुषहरुले महिलाको नाभी छोएमा काली माता क्रोधित हुने धर्म शास्त्रमा विश्वास रहेको छ ।
नाभीमा विराजमान काली माताको रिसलाई कसैले थेग्न नसक्ने हुँदा त्यसको परिणाम अनिष्ट हुने र काली मातालाई क्रोधित बनाउदा जीवनभर दु:ख/कष्ट झेल्नु पर्ने धार्मिक मान्यता छ । त्यसैले आफ्नो श्रीमती होस् वा प्रेमीका कसैको पनि नाभी छुन नहुने धर्मशांस्त्रले बताउँछ ।